Toyota Corolla 2/3 ခလုတ်သည် 315 / 433mhz 4D67 chip ဖြစ်သည်
433mhz ဖြင့် Toyota Corolla 2/3 ခလုတ်ခလုတ်အတွက်၊ 4D67 ချစ်ပ်မူရင်းအရွယ်အစားလက်ကားအရည်အသွေးမြင့်မားသောအမျိုးအစားကိုပေးပါ။ အဝေးမှသော့ခလုတ် - ၂/၃ ခလုတ် Transponder Chip: G / 4D67 Chip အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - ဟုတ်ပါသည်ကြိမ်နှုန်း: 315/433 MHZ : Corolla RAV4 ၂၀၀၆-၂၀၁၀ တွင်ကားသော့အမျိုးမျိုးကို BMW / FOR Acura / FOR Alfa၊ Audi / FOR Benz / BMW / Buick / Cadillac FOR Chevrolet / FOR Holden၊ Chrysler / FOR Chrysler / FOR Citroen အတွက်ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ / Ford အတွက် / Fiat၊ GM အတွက် / Honda / F အတွက် ... FOR
Toyota ၏ Avensis Corolla Yaris Rav4 အတွက် ၂/၃ ခလုတ်အဝေးထိန်းကားသော့ခတ် 433MHz 4D67 Chip FCC ID: HYQ12BBT
Toyota 315 / 433mhz 2/3 ခလုတ်အတွက် 4D67 ချစ်ပ်သုံးသောခလုတ်ခလုတ်အတွက် Toyota Land Cruiser Prado အမျိုးအစား - အစားထိုးသော့ခတ်စာလုံးဖြင့်ဓါးဖြင့်အစားထိုးထုတ်ကုန်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - Transponder Chip: 4D67 အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီ - ဟုတ်သည်။ ခလုတ် - ၃ ခုခလုတ်ပစ္စည်းများ - ABS နှင့် Metal Colour: အနက်ရောင်လျှောက်လွှာများ - အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းနံပါတ် - HYQ12BBT အပိုင်းနံပါတ်များ - HYQ12BBT, 1511A-12BBT, 89070-24171, 89070-33750 သဟဇာတ: Toyota Corolla 2001 - 2007 Toyota RAV4 2000 - 2003 Toyota Avensis 2001 --2003 Toy ...
Remote Car Key ကို 314.4MHZ ID67 Chip HYQ12BBY အတွက် Toyota Camry အတွက် Avalon Corolla Matrix RAV4 Yaris Venza TC / XA / XB / XC 3/4 BTN
Remote Car Key ကို 314.4MHZ ID67 Chip HYQ12BBY အတွက် Toyota Camry အတွက် Avalon Corolla Matrix RAV4 Yaris Venza TC / XA / XB / XC 3/4 BTN တပ်ဆင်မှု - Toyota နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသော့အလွတ်နှင့်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့်တူသည်။ အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: ဓာတ်ပုံပြပါ Buttons: 3/4 ခလုတ်များ Key Blank: Yes Transponder ချစ်ပ်: ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်ပြား: ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီ: ဟုတ်သည်အင်္ဂါရပ်များ: 1 ...
2/3/4 BTNS Remote Car Key Shell FOB Toyota Yaris Prado Tarago Camry Corolla RAV4 REIZ Crown Avalon Venza 2007-2012
2/3/4 Toyota Yaris Prado Tarago Camry Corolla အတွက် Remote Car Key Shell FOB RAV4 REIZ Crown Avalon Venza 2007-2012 တပ်ဆင်မှု - Toyota နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါကဏ္asတွင်ဖော်ပြထားသော……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………။ 100% Brand New Colour: ပုံကိုပြပါ Buttons: 2/3/4 Button Key Blank: Yes Transponder Chip: No Electronics / Battery: မရှိပါ။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသော key case နှင့်သော့ကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာမဟုတ်ပါ။
တိုယိုတာ keyless key အတွက် 8A / H chip-434mhz ပါသော Smart Car Key မူရင်း CH-R2ခလုတ်ခလုတ်ခုံ
တိုယိုတာသော့မဲ့သော့အတွက် 8A / H chip-434mhz ပါသော Smart Car Key မူရင်း CH-R2ခလုတ်ခလုတ်ခတ်နှုန်း - 433MHz ချစ်ပ် - 8A တပ်ဆင်မှု - အတွက် Toyota CHR 2018 2019 2020 အရေးကြီးမှတ်ချက် - ၁။ သင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားမှုကိုစစ်ဆေးပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော transmitter နှင့် chip ဖြစ်သည်။ ၂။ ပုံသည်တကယ့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကားသော့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ၊ သင်မ ၀ ယ်ခင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်နှင့်တူညီကြောင်းသေချာစေပါ ၃။ သော့သည်သင်၏မူရင်း key board အတွက်မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Toyota TOY43 Blade အတွက် G Chip 4D67 Chip H Chip 4C Chip Transponder သော့
Toyota TOY43 Blade Programming အတွက် G Chip 4D67 Chip H Chip 4C Chip Transponder သော့ချက် - ဤသော့ခတ်ခြင်းကိုသင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဒေသခံမော်တော်ယာဉ်သော့ခတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဓိကကားရောင်းဝယ်သူများသည်အစီအစဉ်ချနိုင်ခြင်းကြောင့် aftermarket သော့များကိုပရိုဂရမ်ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ BMW / FOR Acura / FOR Alfa / FOR Audi / FOR Benz / FOR BMW / FOR Buick / FOR Cadillac / FOR Chevrolet / FOR Chrysler / FOR Chrysler / FOR Citroen / FOR Ford / FOR Fiat / GM / FOR Honda / FOR Hyundai / FOR K အတွက်…
Toyota Camary Corolla အတွက် 314.4 MHZ အတွက် H Chip HYQ2BEL4Button Remote Key Smart Car Key Fob
Toyota Camary Corolla 314.4 MHZ အတွက် H Chip HYQ2BEL4Button အဝေးထိန်းသော့သော့သော့ Key Fob အခြေအနေ - ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းခလုတ် - ၄ ခလုတ်အရွယ်အစား - ၁၀ စင်တီမီတာ * ၃.၆ စင်တီမီတာ * ၁.၃ စင်တီမီတာ (L * W * H) အလေးချိန် : 26g ကြိမ်နှုန်း: 314.4Mhz FCC ID: HYQ2BEL Chip: H Chip အသွင်အပြင်များ: 1. ရောင်းသည့်ပစ္စည်းသည် DIY ဝေးလံသောသော့ဖြစ်သည်။ H ကို chip နှင့်အတူကြိမ်နှုန်း 314.4MHz ။ ၂။ ဝေးလံခေါင်သီသော့ခတ်တွင်သော့အိမ်၊ circuit board၊ ဘက်ထရီနှင့်ချစ်ပ်တို့ပါဝင်သည်။ logo မပါဘဲ ၃။ သော့ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲရန်နှင့်ဒေသတွင်းမော်တော်ယာဉ်သော့ခတ်များတွင်ဓါးကိုဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Toyota Corolla RAV4 2006-2010 433Mhz Transponder G သို့မဟုတ် 4D67 Chip အတွက်ရွေးချယ်စရာ TOY43 Uncut Blade အတွက် 2BT Keyless Entry Remote Key Fob
Toyota Corolla အတွက် 2BT Keyless Entry Remote Key Fob 2006-2010-2010 433Mhz Transponder G or 4D67 Chip optional TOY43 Uncut Blade အခြေအနေ: ၁၀၀% ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အရွယ်အစားလက်ကားအရည်အသွေးမြင့်အမျိုးအစားပေးသည်။ အဝေးထိန်းခလုတ်ခလုတ် - ၂ ခလုတ် Transponder Chip: G / 4D67 Chip အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - ဟုတ်ပါသည်ကြိမ်နှုန်း - 433 MHZ နှင့်ကိုက်ညီသည် - Corolla RAV4 2006-2010 တွင်ပါ ၀ င်သည့် Package: 1PC * အဝေးထိန်းသော့ကားကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုးကို ... FOR ...
toyota အတွက် Car Remote pcb3 ခလုတ်ကို Remote Control Circuit Board 434mhz 315mhz Camry Corolla Highland နှင့်ကားသော့။
toyota အတွက် Car Remote pcb3 ခလုတ်ခုံထိန်းချုပ်မှု Circuit Board 434mhz 315mhz toyota Camry Corolla Highland အမှတ်တံဆိပ်ကား၏အဓိကသော့ချက်များဘက်ထရီ - ဟုတ်ပါသည်ကြိမ်နှုန်း - ၃၁၄.၄ / ၃၁၅ / ၄၃၄MHz FCC ID: HYQ12BBY တပ်ဆင်မှု - Toyota RAV4 Yaris Venza ScionC / xA / xB / xC အတွက် Toyota Hilux အတွက် Toyota Camry 2006-2010 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ Toyota အရည်အသွေးအတွက်အသုံးပြုမှုအရွယ်အစားမူရင်းစံပုံစံစတိုင်အဝေးထိန်းခလုတ်သည် ၃၁၅ MHZ 433mhz အရောင်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်နှင့်ပစ္စည်းအသားတင်အလေးချိန် (k ...